८ बर्षसम्म नबसेकाे सुन्दरमाला जब बस्याे…! | Hamro Biratnagar
गृह पेज अन्य जीव-जन्तु ८ बर्षसम्म नबसेकाे सुन्दरमाला जब बस्याे…!
८ बर्षसम्म नबसेकाे सुन्दरमाला जब बस्याे…!
निकुञ्जको सौराहास्थित हात्तीसारमा रहेको सुन्दरमाला नामक हात्ती आठ वर्षदेखि कहिल्यै भूइँमा सुतेन । ऊ आफैँलाई बाँधेको खबारी (खाँबो) को सहारामा आड लगाएर निदाउने गर्थ्यो । भदौ २१ गते जब ऊ भुइँमा लम्पसार पर्‍यो, जीवनको अन्त्य पनि त्यही बेला भयो ।
विसं २००२ मा जन्मिएको भनिएको सो हात्ती भारतबाट ल्याइएको हो । महतो भन्छन् “बडामहारानी, राजारानी चढ्ने हात्ती हो रे यो ।” निकै ज्ञानी भएकाले राजपरिवारले मन पराएको भन्ने आफूले सुनेको उनले जानकारी दिए ।
पोथी हात्ती सुन्दरमाला लामो समय निकुञ्ज सुरक्षामा खटिए पनि जीवनभर कहिल्यै सन्तान भने जन्माएन । निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा विजय श्रेष्ठ कुनैकुनै हात्ती बसेपछि उठ्न नसक्ने डरले नबस्ने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार हात्तीको तौल चार हजार किलो हाराहारी हुन्छ । उनले भने, “शरीर कमजोर हुँदै गएपछि उठ्न सक्दिन भन्ने ठानेरै हात्ती नबसेको होला ।” आफू बसेको बेला जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरेकाले बस्दा फेरि आक्रमण हुने डरले पनि नबसेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
निकुञ्जका विभिन्न ठाउँमा ५८ हात्ती छन् । विगतमा पर्यटकलाई घुमाउनसमेत प्रयोग हुने गरेका हात्ती पछिल्लो समय सुरक्षाका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएका छन् । निकुञ्जमा अन्य सवारी साधन पुग्न नसक्ने ठाउँमा समेत हात्ती जाने भएकाले निकुञ्ज सुरक्षाका लागि हात्तीको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ ।
निकुञ्जको हात्ती प्रजनन केन्द्रमा जन्मिएका छावालाई त्यहीँ तालीम दिएर सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरिन्छ । शुरुआती दिनमा भने भारतलगायत विभिन्न ठाउँबाट हात्ती किनेर यहाँ ल्याइएको हो । भीमकाय जनावर हात्ती पाल्न खर्च पनि निकै लाग्छ । हात्तीलाई धान र सख्खर मुछेर घाँसमा बेरी कुची तयार पारेर खुवाइन्छ । उसलाई घाँसे मैदान र जङ्गलमा चराउन पनि लगिन्छ ।
अघिल्लो समाचारभक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा कराेडाैँकाे चलखेल
अर्को समाचारतालिवानको आक्रमणमा परेर १६ अफ्गानी सैनिकको मृत्यु